युद्धले चिनिएको रोल्पालाई अब संगितले चिनाउनुछ: आउनुहोस शनि बिकलाई यसरि भोट गरौ	Postpati – News For All
नेपालले सुनिल बलको गोलमा फेरी अग्रता लियो
सुनिल बल चम्किंदा साग फुटबलमा नेपाललाई स्वर्ण
प्रचण्डलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएपछि जुर्मुरायो नेकपा
साग फुटबल: फाइनलमा नेपालले भुटानविरुद्ध लियो अग्रता
साग फुटबल: भुटानले गोल फर्कायो, खेल बराबरी
गौरिका- जसले पाइन् एकै सागमा चार स्वर्ण, नौ पदक
अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाजको पहलमा मृगौलापीडित श्याम सुनारलाई आर्थिक सहयोग
जापानी भाषा परीक्षामा सबैभन्दा कमजोर नेपाली
नेकपाको नयाँ कार्यदिशा: वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्दै साम्यवादतर्फ
युद्धले चिनिएको रोल्पालाई अब संगितले चिनाउनुछ: आउनुहोस शनि बिकलाई यसरि भोट गरौ
विनोद डाँगी २०७६ भाद्र ६,शुक्रबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
विनोद डाँगी/ भदौ ६, रोल्पा । रोल्पा शनि विश्वकर्मा यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन । नेपाली लोक स्टारको पहिलो राउण्डमै गोल्डेन स्टार पाएर टप २० मा पुगेका शनिको विगत त्यति सजिलो रहेन ।
रोल्पा जिल्ला जनयुद्धको उद्गम थलो । भर्खर युद्दको घाउहरु सेलाउदै थिए । चराहरु शान्तरुपमा उड्न थालेका थिए । बालबच्चाहरु निर्धक्क खेल्न थालेका थिए । गोठालो जाने आमाबाबुहरु बल्ल आनन्दले गित गाउदै स्याउलापात गर्दै काम गर्ने वातावरणमा थिए । त्यहि बेला रोल्पाको सदरमुकाम नजिकै रहेको जंकोट गाविसको वडा नं ८ मा आमा मन कुमारीको कोखबाट जन्म लिन पुगे शनि विश्वकर्मा ।
बाबुको नाम मन बहादुर बिक हो । घरको आर्थिक अवस्था त्यति बलियो थिएन तर पनि जेनतेन हुर्किने अवसर पाए शनि । आमाबाबु अनि परिवारको मेहनतले उनी पनि सानैदखि लगनशील रहे । खासै बोल्दैनन उनी तर उनिभित्र अथाहा प्रतिभा लुकेर रहेको छ ।
गाउकै विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म पढेका शनि त्यसपछि लिबाङमा रहेको बालकल्याण उमाविमा अध्ययन गरे । कक्षा १२ सम्मको अध्ययन दाङमा गरेका उनी पहिलोपटक गाउनकै लागि भनेर स्टेज चढेको चाहिँ ११ बर्षको हुदा हो । गाउकै एक कार्यक्रममा पहिलोपटक स्टेजमा गाउन जादा सबैले उनको स्वरको तारिफ गरे । एक मात्र भए नपत्याउने थिए तर सबैले भनेपछि हो कि भन्नेमा पुगियो ( उनी भन्छन । अहिलेसम्म संगितको औपचारिक शिक्षा नलिएका उनको स्वर सुन्दा जो कोहि पनि मन्त्रमुग्ध हुन्छन ।
लिबाङमा सामुदायिक रेडियो जलजलाले बार्षिकोत्सव मनाउनको लागि जलजला तारा दिएर गायन प्रतियोगिता गर्दै थियो । हल्ला सुनेर शनि पनि दौडिए । उनी टप १० मा पुगे । राप्ति आइडलमा टप २ सम्म परे उनि । उनिमा एक अथाह प्रतिभा छ । टप १० बाट बाहिरिदा खासै निराश बनेन उनि । भन्छन म अझै ठुलो स्टेजको खोजिमा थिए जुन आज पाएको छु । कुराकानिकै क्रममा उनले भने दाई म यो नेपालि लोक स्टार जिते राम्रो नजिते पनि दुखि बन्ने छैन किनकि म हिम्मत हार्दिन । यहाँ एक से एक प्रतिस्पर्धिहरु हुनुहुन्छ । सक्दो मेहनत गर्नैपर्छ । म त्यसका लागि जुन हदसम्म जान पनि तयार छु । आजबाट शनिको असली भाग्य परिक्षा सूरु हुदैछ । यो बेला शनि आफै पनि निकै संयम भएर गाउनु पर्ने हुन्छ ।
रह््यो शनिको गृहजिल्ला रोल्पाको कुरा । अहिलेसम्म कुनै अभियानहरु चलाइएको छैन । चौतारा र चियापसलमा शनिको बारेमा कुरा चाहि चलेकै हुन्छ । हिजोे युद्धको रोल्पालाई आज शनिले संगितको रोल्पा भनेर चिनाइरहेका छन । अहिले धेरैले शनिको नाम सुनेका छन अघm भनौ उनको प्रतिभा देखेका छन । यो अझै बुलन्द बनाउनु छ सबै मिलेर त्यो मात्र संभव छ त शनिलाई पहिलो नेपाली लोक स्टार बनाएर । शनि भन्छन, दाई म रोल्पाली भएर रोल्पाबाट धेरै आशा राखेको छु तर म नेपालको छोरो हु आशा छ सारा नेपालीले माया गरेर भोट गर्नुहुनेछ , सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ । शनिले म नेपालको छोरा हु भन्नेवित्तिकै मैले संझिए उसमा फरक खालको जिम्मेवारीपन छ । हामीले नेपाल आइडल, भ्वाइस अफ नेपाल हेर्यौ जहा प्रतिस्पर्धिहरु आफ्नो गृह जिल्लालाई धेरै अपेक्षामा राख्दथे । शनि भने हरेकलाई बराबर मान्दछन । र यो उमेरमा उनले अपनाएको यो संयमता निकै गजव छ ।
शनि बिकलाई यसरि भोट गरौ
शनिलाई विजय बनाउनु छ । एकपटक फेरी रोल्पाको शानलाई बढाउनु छ । झापा, पोखरा, चितवन, राजधानिले मात्र स्टार, आइडल पाउनु पर्छ भनेर कहा लेखेको छ । एकपटक मध्य भुभागलाई पनि यो अवसर प्रदान गरौ । तर यसका लागि साथ र सहयोगको भरपुर आवश्यक छ । निर्णायक सामु आवाजको जादु शनिले चलाउछन र हामीले चलाउनु पर्ने त्यहि भोटको लागि एक अभियान । आउनुस एक सामान्य परिवारको, कुशल, निकै मेहनति र स्वरमा छुट्टै जादु भएको शनि विश्वकर्मालाइ विजय बनाउन अभियान चलाऔ ।
शनि सम्पुर्णको लागि एक प्रेरणाको श्रोत पनि हुन । यति भनिरहदा शनिको गुनगान मात्र भयो भन्न पनि सक्नुहुन्छ पाठकहरुले । तर शनि आफैमा एक प्रतिभा हो । सायद शनिको ठाउमा अरु कुनै हुन्थे तर शनिको जतिको प्रतिभा हुदैन थियो भने म मौन बसिदिन्थे होला ।
शनिलाई भोट गर्न नेपालबाट आइएइ पे एप डाउनलोड गरेर गर्न सकिन्छ । आइएमई पे चलाउनु हुदैन भने शनिको वालेट नंबर ९८१०९१४४२७ मा पैसा पठाएर पनि सहयोग गरिदिनुस । त्यसपछि आफै भोट गर्न सक्छन ।
नेपालमा रहेका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले ‘L’ टाइप गरि एक स्पेश दिएर २४ लेखि (L 24) ३७०० मा पठाउन सक्नुहुनेछ भने भारतमा रहनेले सोहि तरिका अपनाएर ५३०१० मा मेसेज पठाएर भोट गर्न सक्नुहुन्छ । कतारमा रहने साथिहरुले सोहि उपाय अपनाएर ९२३०० मा पठाउन सक्नुहुन्छ ।
स्मरण रहोस एक मोबाइलबाट जति पनि भोट गर्न सकिन्छ । मोबाईलबाट भोटिंग बिहिबार देखि सुक्रबार १२ बजे सम्म मात्र गर्न सकिनेछ भने सोमबार देखि सुक्रबार १२ बजे सम्म ‘आइ एमई पे’बाट गर्न सकिनेछ ।
नेपाली लोक स्टार
आँखा लाउन छोड अब कालापानीमा (भिडियो)
दि भ्वाइस अफ नेपाल -२ को बिजेता राम लिम्बु,
नायिका ऋचा शर्माले गरिन् बिहे
कोरियामा सीताको वन लेग डान्सपछि पाईन ठुलो सफलता [फोटोफिचर]
नेत्र भण्डारी र मिरा गिरीको ‘अमिलो अम्चुर’ गीत सार्वजनिक [भिडियो]
कसले गायो चर्चित गित ‘चौतारीको बर’ ? [भिडियो]
चुनाव किन बहिष्कार कामरेड ?
अनन्त तामाङको गोलमा दोस्रो हाफमा नेपालको अग्रता
रोल्पाका द्वन्दपिडित तथा टुहुरालाई बेल्जियमका आमाहरुको सहयोग हस्तान्तरण
माल्दिभ्स बिरुद्द नेपालको जित